Efa nitaky ny hanafoanana ny fifidianana rehetra ny eo anivon’ny fanoherana tarihin’i Marc Ravalomanana. Efa nisy ny fanambarana niraisan’ireo Vondron’ny kandida izay naneho fa voafitaka ny vahoaka Malagasy sy ny fianakaviambe iraisam-pirenena izay niantoka ara-bola ny fifidianana. Niara-nanao sonia izany ireo kandida maromaro toa an’i Marc Ravalomanana, ny solontenan’i Hery Rajaonarimampianina, Solontenan’i Tabera Randriamanantsoa, Arlette Ramaroson, Pasitera Mailhol André Christian Dieu Donné, Marcellin Andriantseheno, Jean Jacques Ratsietison, Jules Etienne Rolland, Solo Norbert Andriamorasata, Fanirisoa Ernaivo. Tsapa ho manamafy ny fitakiany, ary manindrontsindrona ny fitondrana ny mpanohitra amin’ny alalan’ny fampitenenenana karazan’olona samihafa. Tsapa izany tamin’ny fandaharana iraisan’ireo onjam-peo sokajiana ho mirona kokoa amin’ny fanoherana omaly alahady 15 martsa, fantatra amin’ny hoe: “Miara-mampita”. Sesilany ny fanehoan-kevitra, toy ny resaka lisi-pifidianana sy ny karapanondro miverin-droa. Isan’izany, ohatra ny hoe: nahoana ary no noroahina ny Tale Jeneralin’ny Trano Printim-pirenena taorian’ny fanambarany fa misy karapanondro sy kara-pifidianana tsy avy amin’izy ireo? Ny 19 martsa izao no hisy ny fihaonan’ny CENI amin’ireo mpiara-miombon’antoka ka ho hita eo indray izay hambaran’io rafitra io sy izay ho setrin’ny fanakianana avy amin’ny mpanohitra.